Bubble Pop! Puzzle Game Legend အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
21.0906.00 for Android
ဒေါင်းလုပ် XAPK（42.7MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Bubble Pop! Puzzle Game Legend
ပူဖောင်းပေါ့! Puzzle Game Legend သည်စွဲလမ်းစေသောပူဖောင်းသေနတ်သမားဂိမ်းသည်သန်းပေါင်းများစွာသောချစ်ကြသည့်အချစ်ဆုံးသောသေနတ်သမားဂိမ်းဖြစ်သည်။
ဒီ Bubble Shooter သည်သင်၏ပျင်းခြင်းအတွက်အချိန်မရွေးဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။ သင်ပျော်စရာကောင်းသောပူဖောင်းများကိုနာရီအနည်းငယ်ကြာအောင်ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ ဘုတ်အဖွဲ့ကိုရှင်းလင်းရန်နှင့်အကြွေစေ့များကိုရှင်းလင်းရန်ရောင်စုံပူဖောင်းအားလုံးကိုရိုက်ပါ။ ပူဖောင်းများအားလုံးကိုကွဲ။ လှည့်စားသောပဟေ les ိများကိုဖြေရှင်းရန် Epic boosters များကိုသုံးပါ။
သင်၏သေနတ်သမားကိုပစ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အသာပုတ်ပါ။ •ကိုက်ညီမှု3ခုသို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောပူဖောင်းပါ ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များနှင့်ကြယ်များကိုရရန်ရိုက်ချက်များနည်းပါးသည်။ •ပူဖောင်းများပိုမိုများပြားလာရန်အစွမ်းထက် boosters များဖန်တီးပါ။ •ဗုံးတစ်လုံးကိုဖန်တီးရန် BABBOSS
7 combos လုပ်ပါ။ တစ် ဦး က BEAM ရိုက်ချက်။
ရာပေါင်းများစွာသောထူးခြားသောအဆင့်များ! •ဂိမ်းများကိုကျွမ်းကျင်ရန်ခက်ခဲသည်။ Offline! •အထူးဆုလာဘ်များရရန်ဂိမ်းကစားခြင်း!
•လမ်းညွှန်လိုင်းနှင့်အတူတိကျသောပူဖောင်းသေနတ်သမား! • Puzzle Game Legend သည်အခမဲ့ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်, သို့သော်ကြော်ငြာအခမဲ့နှင့်ဒင်္ဂါးများကဲ့သို့ In-app ပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်သည်။ ဒဏ္ end ာရီတွင်ကြော်ငြာများပါ0င်သည်။
ပဟေ games ိပွဲကိုပဟေ people pop နှင့်ဖြေရှင်းရန်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒဏ္ leg ာရီကိုရေးရန်သင်၏သေနတ်သမားကိုအသုံးပြုပါ။
ဘာအသစ်လဲ Bubble Pop! Puzzle Game Legend 21.0906.00
Bubble Pop! Puzzle Game Legend - All Levels Gameplay Android, iOS
Bubble Pop! Puzzle Game Legend 21.0901.00
Bubble Pop! Puzzle Game Legend 21.0809.00